Privacy ဖော်ပြချက် & GDPR လိုက်နာမှု - shoppingdirect24.com - SD24
Home > Privacy ဖော်ပြချက် & GDPR လိုက်နာမှု
shoppingdirect24.com - SD24 သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ
အဆိုပါ GDPR အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့ဤ link ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေး:
နှင့်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ site အကောင်းဆုံးပါ။
- ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင် configured ပြီ
" အပြည့်အဝ IP လိပ်စာများကိုခြေရာခံနှင့်စနစ်အားလုံးကို IP လိပ်စာများဖျောက်ပေးသည်မထားပါနဲ့။
GDPR လိုက်နာမှုရန်, အိုင်ပီလိပ်စာကဲ့သို့ပင် anonymiztion အားလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်ပြဌာန်းထားပြီးမှုကြောင့်။ "
- ကျနော်တို့သာစုပေါင်းပုံစံများအတွက်စတိုးဆိုင်ဧည့်သည်ယာဉ်အသွားအလာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်စာရင်းအင်း apps များနှင့် tools တွေကိုသုံးပါ။ အထူးသဖြင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူမှု၏ဆက်စပ်၌သငျတို့ကထောက်ပံ့ပေးကြောင်းထက်အခြား, နာမည်, လိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကဲ့သို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းသို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုတာကိုသူတို့သတိပြုမိပါ။ ကျနော်တို့ဆိုစာရင်းအင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ကိုမသုံးကြဘူး။
- သင့်အချက်အလက်များ၏တတိယပါတီလက်လှမ်းသို့မဟုတ်ဂီယာတစ်ခုသာလိုအပ်-to-သိအခြေခံပေါ်မှာဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုနေသည် (ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း / SHIPPER နှင့်ငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာမှဥပမာ) နှင့်သာသငျနှငျ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏တိုက်ရိုက်အကငျြ့ဘို့အောက်တွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုပါ။
သင်ဆိုက်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကအလိုအလျှောက်သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကို, အိုင်ပီလိပ်စာ, အချိန်ဇုန်, ပထဝီတည်နေရာနှင့်သင့် device ကိုအပေါ်ကို install သော cookies များကိုအချို့နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်သင့်ရဲ့ device ကိုအကြောင်းကိုအချို့သောသတင်းအချက်အလက်, စုဆောင်းပါ။ သင်ဆိုက်ကို browse အဖြစ်ထို့အပြင်ကျနော်တို့ဆိုက်ကိုရန်သင့်အားရည်ညွှန်းသောအရာကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများ, သင်ကြည့်ရှုသောတစ်ဦးချင်းစီကို web စာမျက်နှာများတွင်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်း, သင်ဆိုက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ကြှနျုပျတို့သညျ "စက်ပစ္စည်း Information" ဆိုတဲ့အတိုင်းဤသည်အလိုအလျောက်-ကောက်ခံသတင်းအချက်အလက်ကိုကိုးကားပါ။
- "Log in ဝင်ရန်ဖိုင်တွေ" လမ်းကြောင်းလုပ်ရပ်များဆိုက်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်, သင်၏ IP လိပ်စာကို, ပထဝီတည်နေရာ, browser ကိုအမျိုးအစား, အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေး, ရည်ညွှန်းပြီး / ထွက်ပေါက်စာမျက်နှာများ, နှင့်နေ့စွဲ / အချိန်တံဆိပ်ခေါင်းများအပါအဝင်ဒေတာစုဆောင်းပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်တော်လျာထားသောကြော်ငြာများသို့မဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်ယုံကြည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူသငျသညျများကိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များသုံးနိုင်ပါသည်။ ဘယ်လိုလျာထားသောကြော်ငြာခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင် http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work မှာကွန်ယက် Advertising ကြော်ငြာ Initiative ရဲ့ ( "NAI") ပညာရေးစာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
ငါတို့ကဲ့သို့ဝေးထိုကဲ့သို့သော option ကိုမရရှိနိုင်ပါသည်အတိုင်း, တောင်းဆိုမှုများကိုခြေရာခံကြဘူးလေးစားမှုမှစာရင်းအင်းအချက်အလက်ကောက်ယူမှုကိရိယာများနှင့် app များကို configured ပါပြီ။
ကြှနျုပျတို့၏ website အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင် (ထိုဧည့်သည်) နောက်ထပ်ငွေကြေးပြောင်းလဲခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့အသင့်တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, တတိယပါတီများကသင်၏ IP လိပ်စာကိုစီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်သဘောတူသဘောတူသည်။ သငျသညျလညျးထိုငွေကြေးကိုသင့် browser (သင်သင့် browser ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအလိုအလျှောက်ဖယ်ရှားရရှိထားတဲ့ယာယီ cookie ကို) တွင်တစ်ဦး session ကို cookie ကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဆက်တင်ရှိသည်ဖို့သဘောတူသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုကြည့်ရှုသည့်အခါစျေးနှုန်းသင့်ရဲ့ (ထိုဧည့်သည်) ဒေသခံငွေကြေးစနစ်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ရွေးချယ်တသမတ်တည်းဆက်လက်ရှိနေရန်ရွေးချယ်ထားငွေကြေးအဘို့အလို့ငှာ၌ဤလုပ်ပါ။
သင်သည်အခြားမေးခွန်းများကိုရှိပါက, သို့မဟုတ်သင်တိုင်ကြားချက်လုပ်ချင်ပါတယ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုအလေ့အကျင့်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက, မှာက e-mail ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်